तपाइँको ग्राहकहरु लाई लुकाउन रोक्नुहोस्
सोमबार, सेप्टेम्बर 13, 2010 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 माइकल रेनल्ड्स
यसले अझै पनि मलाई चकित पार्दछ कति कम्पनीहरूले आफ्ना ग्राहकहरूबाट लुकाउँदछन्। म आईफोन अनुप्रयोग विकासकर्ताहरूमा गत हप्ता केहि अनुसन्धान गर्दै थिए किनभने मसँग एक ग्राहक छ जो आईफोन अनुप्रयोगको खाँचो छ। मैले ट्विटरमा केहि मानिसहरूलाई सोधें। Douglas Karr मलाई केहि रेफरल दियो र मलाई अर्को साथीसँग अघिल्लो कुराकानीबाट एउटा सन्दर्भ पनि थाहा थियो। म तीन बिभिन्न कम्पनीहरूको वेबसाइटहरूमा गएँ र तुरुन्तै निराश भएँ।
प्रत्येक कम्पनीको कम्तिमा एक वेबसाइट थियो तर तिनीहरू सबै अस्पष्ट, विरल, बोरिंग, वा माथिका सबै थिए। तिनीहरूले स्पष्ट रूपमा "हामी आईफोन अनुप्रयोगहरू बनाउँदैनौं" पनि भनेनौं र कुनै पनि अघिल्लो काम वा स्क्रिन शटहरू प्रदर्शन गर्दैनौं।
यो झन् झन् खराब भयो जब म तिनीहरूको सम्पर्क पृष्ठहरूमा गएँ। मैले एक फोन नम्बर, ठेगाना, वा केहि केसहरूमा ईमेल ठेगाना देखिन। धेरै जसो सँग एक साधारण सम्पर्क फारम थियो।
यद्यपि मैले सम्पर्क फारमहरू भरे पनि म अलि चिन्तित भएको महसुस गरिरहेछु। के यी वैध कम्पनीहरू थिए? के म उनीहरूलाई मेरो ग्राहकको पैसाले विश्वास गर्न सक्छु? के उनीहरूले राम्रो काम गर्छन्? मेरो ग्राहकले कसैलाई स्थानीय चाहान्छ - तिनीहरू पनि इन्डियानापोलिसमा अवस्थित छन्?
मेरो क्लाइन्ट एक मिलियन मिलियन डलर निर्माण कम्पनी हो र मैले उनीहरूलाई विश्वासका साथ कोहीलाई रेफर गर्न सक्षम हुनु आवश्यक छ। अहिलेसम्म मलाई सही कम्पनी छ कि भनेर पक्का थिएन।
त्यसोभए, मैले ट्विटरमा अर्को रेफरल पाएँ पाउला हेनरी। उनले मलाई एउटा कम्पनीमा सिफारिश गरिन्। जब म कम्पनीको वेबसाइटमा गएँ, म बिक्री भयो। यहाँ किन छ:
उनीहरूसँग थियो सुन्दर वेबसाइट यसले उनीहरूलाई वास्तविक कम्पनी जस्तो देखिन्छ
तिनीहरूले वास्तविक प्रदर्शन गरे अघिल्लो कामको स्क्रीन शटहरू
तिनीहरू स्पष्ट रूपमा बताउनुहोस् उनीहरू के गर्छन्: "हामी आईफोन अनुप्रयोगहरू विकास गर्छौं"
उनीहरु ट्विटरमा सक्रिय र वेबसाइटमा उनीहरूको ट्विटर कुराकानीहरू प्रदर्शन गर्नुहोस् (म तिनीहरूलाई कुरा गर्न पाउँदछु)
तिनीहरूको सम्पर्क पृष्ठसँग ईमेल ठेगाना, शारीरिक ठेगाना, र फोन नम्बर
संक्षिप्तमा, कम्पनीले मलाई तिनीहरूमाथि विश्वास गर्न सजिलो बनायो। मैले कल गरे र भ्वाइस मेल छोडे र मैले एक घण्टा भित्र फेरि कल प्राप्त गर्‍यो। मैले केहि प्रश्न सोधें र उनीहरूको अघिल्लो कामको बारेमा बढी सिकें। म अब उनीहरूसँग काम गर्न जाँदैछु मेरो ग्राहकको लागि आईफोन अनुप्रयोग विकास गर्न।
तपाईंले अनलाइन प्रस्तुत गर्नुभएको छवि, सन्देश तपाईंले कुराकानी गर्नुभयो, र सम्पर्कको सहजताले तपाईंको ग्राहकहरूलाई ठूलो फरक पार्छ। आफैलाई व्यापार गर्न सजिलो बनाउनुहोस्।
टैग: सम्पर्कसम्पर्क नम्बरसम्पर्क पृष्ठलुक्दैपाउला हेनरी
ब्लग समीक्षा: डेव वुडसन, सामाजिक मिडिया परामर्शदाता